[Sheeko Cajiib Ah:-] Nin Guursaday 15 Dumar ah oo sameeyay Urur u Dhaqdhaqaaqa Guurka Badan
Wednesday 7th December 2016 07:00:00 in Wararkii Maanta by Xafiiska Hargeysa
Sheeko Cajiib Ah:- Nin Guursaday 15 Dumar ah oo sameeyay Urur u Dhaqdhaqaaqa Guurka Badan
Jordan (Karin) Nin u dhashay dalka Jordan oo lagu magacaabo Abu Kalus oo 58 sanno jiray, ayaa sameeyay jimciyadda Ururka guurka dumarka ee badan. Waxaana uu noqday Ururkii ugu horeeyay ee laga sameeyo dalkaasi Jordan.
Mr. Kulus ayaa ururka ka noqday ku xigeen ururkiisa uga dhigay islaan la yidhaahdo Cadiilaha.
Odaygan ayaa guursday 15 dumar oo kala dambeeyay isagoo mar kastana qabay 4 dumara ah. Waxaana uu sheegaya inay u dhaleen 31 carruura.
Mr.Kulus ayaa sheegay inuu ururkan u sameeyay si uu dhaqdhaqaaq iyo asturaad ugu sameeyo hablaha muslimiinta ah oo xuquudoodii iyagu iska hortaagan ka dib markii ay mid kastaa diiday in lala guursado.
Odaygan ayaa sheegay inuu wakhtigan qabo 4 dumar ah, isagoo sheegay in marna aanay dumarkiisu ka yarayn afar, oo haddii mid ay kala tagaan ama dhimato ama ay gabowdo uu markiiba halkeeda ku soo buuxiyo mid kale oo cusub oo yar.
[War Deg Deg ah:-] Madaxweyne Biixi Oo Iminka Shaaciyey Khasaaraha Dhabta Ah Iyo Saameynta Uu Yeesha
Dawladda Somaliland Oo Markii Ugu Horreysay Soo Bandhigtay Hubka Noocyada Badan Iyo Gaadiidka Puntland Ay Kaga Qabsatay
[War Deg Deg Ah:-] Somaliland Oo Iminka Shaacisay Tirada Dhimshada Iyo Saacadihii Ugu Dambeeyay Inta Geeryootay
Midowga Afrika Oo Maanta 55 Sanno Jirsaday, Baro Hab-maamulka Ururkaasi
Mujaahid Cali Guray Oo Ka Hadlay Dagaalka Tuke-raq Iyo Saddex Meelood Oo Uu Sheegay Inay Somaliland Kaga Awood Badantaha
[War Deg Deg Ah:-] Dagaalkii Ceel-afwayn Ee Beelaha Oo Warkii Ugu Cuslaa Iminka Ka Soo Baxay Iyo Xaaladda Rasmiga Ah [L
[War Deg Deg Ah:-] Madaxweyne Biixi Oo Goob Aan Laga Filaneyn Iminka Ka Soo Hadlay Iyo Dagaalka Tukaraq Oo Uu Ka Hadlay